Ianlọ ihe ngosi nka nke Indonesia wepụrụ wax Hitler mgbe oke iwe mba ụwa
November 11, 2017 8 1 min gụọ
Anlọ ihe ngosi nka nke Indonesia, nke mere n'oge na-adịbeghị anya, nyere ndị ọbịa ohere iji ihe osise zuru oke nke Adolf Hitler weghaara onwe ha na azụ nke ọnụ ụzọ ogige ọnwụ nke Auschwitz, agbadala ọnụ ọgụgụ a site na oke nkatọ.
Ụlọ ihe ngosi ihe ngosi nke De Mata De Arca nwere ihe dị ka 100 waxworks nke ndị a ma ama, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị akụkọ ifo, dị ka ebe nrụọrụ weebụ ya si kwuo. Ruo Satọdee, a pụrụ ịhụ ọnụ ọgụgụ Hitler ka ọ kwụ n'etiti Star Wars' Darth Vader na onye ndu Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo.
E debere onye ndu Nazi Germany megide ọkọlọtọ buru ibu nke na-egosi ogige mkpochapụ Auschwitz-Birkenau na akara ngosi ama ama "Arbeit macht frei" (Ọrụ na-eme ka ị nwere onwe gị). Wax Hitler bụ onye ama ama na ndị obodo, ndị na-ekerịta onwe ha na ntanetị. Na snapshots na-egosi ụfọdụ ndị ọbịa na-etinye aka na ekele ndị Nazi.
Ọnụọgụ ndị Hitler kpasuru iwe nke mba ụwa, na Human Rights Watch (HRW) na-akọwa ya "na-arịa ọrịa." Wlọ ọrụ Simon Wiesenthal Center nke dị na Los-Angeles, na-agbachitere imegide Semitism, katọrọ nrụnye ahụ dị ka "ezighi ezi" na "nlelị." Nzụkọ Auschwitz “na-akwa ndị merụrụ ahụ emo na-apụtaghị ma ọlị” na saịtị igbu ọchụ kachasị ukwuu na Nazi, onye isi na-ahụ maka etiti, Rabbi Abraham Cooper kwuru.
A marketing Onye ọrụ na-ahụ maka ihe ngosi nka gwara AP na ọ dịghị mgbe ndị ọbịa mere mkpesa banyere ihe oyiyi ahụ. Ọ sịrị, "Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa anyị na-ekpori ndụ n'ihi na ha maara na nke a bụ naanị ụlọ ngosi ihe ngosi ihe nkiri." Na Satọde, agbanyeghị, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kwuru na ọ kwaturu ihe oyiyi ahụ na-eso oke nkatọ.
"Anyị achọghị ịdọta iwe," onye njikwa ọrụ ihe ngosi nka, Jamie Misbah, gwara AFP. O kwesiri ka onu ogugu a “muta,” ka o kwukwara.
HRW nabatara mkpebi ahụ, na-egosi na ewepụrụ Hitler waxwork, dị ka onye nyocha nke Indonesia Andreas Harsono si kwuo. "N'agbanyeghị ebumnuche ahụ, igosi Hitler dị ka a ga - asị na ọ bụ onye a na - akwanyere ùgwù bụ ihe na - adịghị mma," ka Harsono kwuru, dị ka Haaretz si kwuo.
Grande Lakes Orlando na-agbapụ 'Grande Summer': ekpughere mmeghari ohuru, ewebata mmemme oge ọhụrụ.
MTV Push Live: PortAventura World na Paramount Spain na-emekọ ihe ọnụ iji kwalite ahụmịhe ntụrụndụ
Bahamas sonyeere CARICOM Agri-investment Forum na Expo
Ụbọchị ndị ọbịa ụgbọ elu mba ụwa: Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Wyndham ewebata "ExtraMile"
ATM 2022: Ogologo ogologo oge nke njem na njem nlegharị anya Middle East
Ndị na-aga ụgbọ elu gbara akwụkwọ maka ụgbọ elu Alaska na Union na-azọrọ ịkpa oke okpukpere chi na Firings
Previous Azul na-akọ okporo ụzọ Ọktọba
Osote Rum, aja na oké osimiri: Grenada